लोकप्रिय गायिका बिन्दु परियार र कृष्ण काफ्लेले गाएका 'पर्ख पर्ख मायालु' लाई ५ करोड भ्युज ! -लोकप्रिय गायिका बिन्दु परियार र कृष्ण काफ्लेले गाएका 'पर्ख पर्ख मायालु' लाई ५ करोड भ्युज ! -
लोकप्रिय गायिका बिन्दु परियार र कृष्ण काफ्लेले गाएका ‘पर्ख पर्ख मायालु’ लाई ५ करोड भ्युज !
१९ भाद्र २०७७, शुक्रबार २०:१७ मा प्रकाशित
काठमाडौं । गायिका बिन्दु परियार र गायक कृष्ण काफ्लेको आवाज रहेको नेपाली कथानक चलचित्र ‘मङगलम’ को गीत ‘पर्ख पर्ख मायालु…’ ५ करोडपटक हेरिएको छ ।
हाइलाइट्न नेपालको युट्युब च्यानलबाट अपलोड गरिएको गीत ५ करोड पटक सर्च भएको हो ।
सन् २०१७ सेप्टेम्बर ६ तारिकमा अपलोड गरिएको गीतको भ्युज २०२० अक्टुबर ४ मा २६ मा ५ करोड पुगेको हो । दिपक शर्माको शब्द तथा संगीत रहेको गीतमा स्वर कृष्ण काफ्लेसँगै गायिका बिन्दु परियारको रहेको छ ।
गीतको भिडियोमा शिल्पा पोखरेल,पुस्पा खडकाले अभिनय गरेका छन् ।
गायिका बिन्दु परियारले गाएकी ‘पहिलो नम्बरमा ‘, ‘घर बार’, ‘म के गरुँ’, ‘फोटो खिचेर’ लगायत थुप्रै गीत हिट छन ।